ချင်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ICA ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် - Institute Of Chin Affairs
Institute of Chin Affairs
July 6, 2021,0Comments
ချင်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ICA ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့၊ အာဏာသိမ်းသည့်အချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (စစ်ကောင်စီ) သည် အမျိုးသမီး (၅) ဦးနှင့် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ် (၁၀) ဦးအပါအဝင် ချင်းပြည်နယ်တွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား (၅၁) ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား (၂) ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသတွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား (၂၃) ဦး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသတွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား (၁)ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသတွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား (၁) ဦး၊ မကွေးတိုင်းဒေသတွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား (၃) ဦး တို့အား သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
သေဆုံးသူများသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသည့်အချိန်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ စစ်ကြောရေးအတွင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း တို့ကြောင့် သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ချို့မှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနှင့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးရခြင်း ဖြစ်သည်။
လူဦးရေအရ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများထက် ပမာဏ အလွန်နည်းပါးလှသည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအပေါ်တွင် စစ်ကောင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံ နေရခြင်းအပေါ် ICA သည် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်မိပါသည်။ ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီအတွက် အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ၏ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အလားတူ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ICA သည် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအား အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများအပေါ် အထူးသဖြင့် အပြစ်မဲ့ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအပေါ် သတ်ဖြတ်ခြင်းအား ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအပေါ် အကြောင်းမဲ့ ပစ်ခတ်ခြင်း၊ လက်နက်ကြီးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ရှားရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ICA အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်းကြား ပိုမို စည်းလုံး ညီညွှတ်မှု ရှိစေရန်နှင့် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အပေါ် နိုင်ငံတကာမှ ထိရောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သွားနိုင်ရန် ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်: [email protected], +919362634715
Chin fatalities: https://chinaffairs.org/wp-content/uploads/2021/07/Chin-Civilians-and-Heroes-killed-by-SAC-since-1st-Feb-2021.pdf
World Refugee Day celebrated at Zokhawthar
ICA Vice President at Canadian High Commission
ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး (၄၆)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ချက်
Statement on the 46th Anniversary of Martyrdom of Salai Tin Maung Oo
စစ်ကောင်စီ၏ (၄) ကြိမ်တိုင် ဖျက်ဆီးခံရသည့် တလန်ဇာရ် (Tlangzar) ကျေးရွာ
News – Burmese
Publications – Burmese
News – Burmese 11
News – English 7
Publications – Burmese 10
Publications – English 10
Crimes and Atrocities Committed by the SAC Troops Against the Chin People During the Year Following the Military Coup
စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ချင်းတိုင်းရင်းသား သေဆုံးဦးရေ မြင့်တက်လာခြင်းအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်။ ၁၁ လအတွင်းချင်းတိုင်းရင်းသား (၁၆၀) ကျော် အသတ်ခံရ
စစ်အာဏာသိမ်းသည့် တစ်နှစ်အတွင်း ချင်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အပေါ် စစ်ကောင်စီတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု နှင့် အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများ
The Institute of Chin Affairs (ICA) isanon-profit, charitable organization registered under Internal Revenue Code Section 501 (c) (3). Donations are tax deductible in the United States.
Phone: +61 406 029 962
Phone: +1 512 710 8005
Phone: +91 93626 34715,
© Copyright 2022 Institute of Chin Affairs